In la shaqeeyo xilliga wakhtiga magan-gelyada | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan ahay qof magan-galyo doon ah / In la shaqeeyo xilliga wakhtiga magan-gelyada
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 27 1 2022
Si aad uga shaqayso gudaha Iswiidhan waxaad u baahantahay inaad haysato sharci shaqo. Haddii aad tahay qof magan-gelyo doon ah waxaad taas badalkeeda heli kartaa AT-UND. Tani micnaheedu waa in ”ka dhaafida shuruuda ah in la haysto sharci shaqo”, oo micnaheedu tahay in aad shaqayn karto bilaa sharci shaqo.
Waxaad AT-UND ka heli kartaa Hey'adda Socdaalka haddii aad adigu:
Aad tusi karto dukumenti aqoonsi oo ansax ah ama qaab kale u kaalmayso in la caddeeyo aqoonsigaaga. Tani micnaheedu waa in adigu aad samayso waxa aad awooddo si aad u muujiso cidda aad tahay, tusaale ahaan in la dhiibo dukumentiyo muujinaya aqoonsigaaga.
Magan-gelyo ka codsatay Iswiidhan.
Aanad diidmo ku helin codsiyo magan-gelyo oo hore.
Haddii aad buuxiso shuruudahaas waxaad helaysaa goäaanka ah AT-UND. Shaqo-bixiye wuxuu arki karaa in aad haysato AT-UND iyagoo isgaan garaynaya lambarka QR ee ku yaalla kaarkaaga LMA.
Dheeraad ku saabsan kaarka LMA ka akhriso halkan.
Dheeraad ku saabsan AT-UND ka akhriso bogga Hey'adda Socdaalka. Dheeraad ku saabsan sida aad u caddayn karto qofka aad tahay ka akhriso bogga Hey'adda Socdaalka.
Dheeraad ku saabsan in la bixiyo canshuur xilliga wakhtiga magan-gelyo doonka ka akhriso bogga Hey'adda Canshuuraha. Warbixintan waxaa lagu helayaa oo keliya ingiriisi.